Kim Jong-un oo laga walaacsan yahay inuu siyaasadeeyo xirfadda Han Kwang-song + Sawirro – Gool FM
(Perugia) 17 Jan 2018 – Laacibkan oo ka mid ah xididgaha soo baxaya ee horyaalka Talyaaniga, ayay waayihiisa ciyaareed qaadi rabaan jid kale oo ku ridaya midkii guusha, ninkaani waa qannaaska Cagliari ee Han Kwang-song.
Laacib-yarahan oo fasalkii tegey kusoo baxay Serie A, oo uu ka noqday laacibkii ugu horreeyay ee North Korean ah ee gool ka dhaliya, ayaa u muuqda mid aan bareeg qaban doonin xilli dhow, wuxuuna wacdaro ka dhigayaa kooxda Perugia oo uu amaah haatan ugu dheelo.
Waxyaabaha xiisaha leh waxaa ka mid ah inay xiddiggan doonayso camaaliqada Juventus oo haatan safka sare uga jirta, iyadoo ay wararku sheegayaan inay Old Lady laacib yarahan xagaaga soo qaadanayso.
Han waa uun 19-jir lkn dhibaatada haysataa waxay tahay inuu dalkiisu yahay North Korea, kaasoo aysan reer galbeedka isku fiicnayn, waxaa dhowr mar lagu eedeeyay inuu mushaharkiisa inta badan ku shubo khasnadda dowladda kali taliska ah ee dalkaasi.
Waxaa intaa dheer in beri dhowayd uu baaqday barnaamij TV oo lagu waraysan lahaa iyadoo la sheegay in amarka laga soo dhiibey Pyongyang. Madaxwaynaha dalkaasi ee Kim Jong-un ayaa la fahamsan yahay inuu laacibkan u adeegsanayo wejiga North Korea ee kubadda cagta, taasoo walaac gelinaysa maamulka Talyaaniga.
Si kastaba, wiilkan oo ku dhashay Pyongyang, uu Talyaaniga keenay senetar Antonio Razzi, oo saaxiib dhow la ah Kim Jong-un, kaasoo Han ku casuumey akadamiyaha kubadda cagta Talyaaniga ee ISM Academy.